100ML, 150ML Burette ကလေးအထူးကု Iv Set | Shuangmei
Iv Set အင်္ဂါရပ်:
၁။ စွမ်းဆောင်ရည် - ၁၀၀ မီလီမီတာ၊
၂။ PETG burette, ABS ထိန်းညှိစက်၊ လေအဆို့ရှင်နှင့်စစ်ထုတ်စက်။
အပ်အဖုံး, luer စလစ်သို့မဟုတ် connector ကို, Y connector ကိုအတူ 3. ။
ရှင်းလင်းသောစကေးအမှတ်အသားများနှင့်အတူ 4. အရည်အသွေးမြင့်ပြွန်နှင့် burette ။
အပ်အဖုံး, luer စလစ်သို့မဟုတ် connector ကို, Y connector ကိုအတူ 6. ။
ရှင်းလင်းသောစကေးအမှတ်အသားများနှင့်အတူ 7. အရည်အသွေးမြင့်ပြွန်နှင့် burette ။
၈။ EO ဓာတ်ငွေ့များ၊ ပိုးမွှားများ၊
9. Reduplicative ဇီဝဗေဒနှင့်ဓာတုစမ်းသပ်။
၁၀။ ထုပ်ပိုးခြင်း ၁ ခု / PE အထုပ် (အရည်ကြည်ဖုများရှိသည့်အရည်အတွက်)၊ ၁၀ PCS / Box၊ ၁၀၀ ပီစီ / သေတ္တာများ။
၁၁။ စုစုပေါင်းအလေးချိန် - ၁၃ ကီလိုဂရမ်
၁၂။ ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအချိန် - ၅ နှစ်
အဆိုပါအိုင် Infusion သတ်မှတ်မည်
Iv Infusion Set ဆိုတာဘာလဲ။
Iv set သည်မြုံနေပြီးတစ်ကြိမ်အသုံးပြုခြင်း၊ အရည်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်စေးကပ်မှုမရှိသည့်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆေးများကိုသွေးကြောသွင်းခြင်းအတွက်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
Pediatric Iv Set ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
၁။ ထိပ်တွင်ဆူးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောအကာအကွယ်တစ်ခုဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည် မြုံ.
ပြုတ်ရည်အတွက်ပုလင်းတစ်လုံးကိုအသုံးပြုပါကလေမှထုတ်လွှတ်ရန်အတွက်လေထဲသို့ပုလင်းထဲသို့ ၀ င်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အဖုံးဖွင့်ရန်လိုသည်။
ထို့နောက် 2. တစ်ခါသုံး Iv set တွင် drip chamber ရှိသည်။ အကယ်၍ မင်းဟာရေယိုမှုနှုန်းကိုဆွဲငင်အားဖြင့်တွက်ချက်တော့မယ်ဆိုလျှင်၊
ဒီအစုအတွက်တစ်ကီလိုလျှင် ၂၀ ပေါက်ပေးကြောင်းသတိပြုပါ။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယိုခန်းထဲတွင်အရည်မှန်မှန်ရရှိစေရန်အောက်ခြေမှလိုင်းသည်လေကြောင်းစီးဆင်းမှုကိုလိုင်းမှ ဖြတ်၍ မသွားစေရန်လိုအပ်သောအနည်းဆုံးအရည်ပမာဏကိုပြသသည်။ ဒီအခန်းကိုသုံးပုံတစ်ပုံမှတစ်ဝက်လောက်ပြည့်စေချင်တယ်။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြွန်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆို့ရှင်ထံသို့ ဦး စွာရောက်ရှိကြောင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်။ ၎င်းမှာအရည်မည်သည့်အရည်ကိုမဆိုလက်ရှိချိတ်ဆွဲနေသောအိတ်ဆီသို့ပြန်မသွားရန်တားဆီးထားသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးစမတ်မျက်လုံးနှင့်ကပ်လျက်လာသည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အလယ်တန်းမျဉ်းကြောင်းဆွဲနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။
5. နောက်လာမည့်အရာသည် roller clamp ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြေထုဆွဲအားအားဖြင့်အရည်ကို run နေပါကစီးဆင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်၎င်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်
၆။ နောက်ဆုံး၊ လိုင်းကိုဆက်လက်စစ်ဆေးစဉ် Luer အထီးသို့အခြားစမတ်မျက်လုံးကိုကျော်ဖြတ်ပြီး Luer အထီးသည်
ငါတို့လူနာနှင့်အတူပူးတွဲခံရဖို့အဆင်သင့်လည်းမြုံအစွန်အဖျား။ တကယ်တော့အခုပြွန်ကိုချွတ်လိုက်ပါ၊ ယခုသင်စီးဆင်းမှုကို Luer အထီးအထိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ထိုအခါယိုအခန်းထဲရှိအရည်ကိုရလိုက်သည်။